warkii.com » RASMI: Sharci Cusub Oo Lagu Soo Kordhiyay Kubada Cagta Xilli Ciyaareedkan Oo La Ogolaaday In La Isticmaalo Xilli Ciyaareedka Soo Socda
RASMI: Sharci Cusub Oo Lagu Soo Kordhiyay Kubada Cagta Xilli Ciyaareedkan Oo La Ogolaaday In La Isticmaalo Xilli Ciyaareedka Soo Socda
FIFA ayaa kordhisay waqtiga la isticmaalayo sharci cusub oo ay soo kordhisay xilli ciyaareedkan iyagoo u ogolaaday u kooxaha inay shan bedel sameyn karaan xilli ciyaareedka soo socda ee 2020-21.
Horyaalada Yurub ayaa haatan laga isticmaalaa shan bedel iyadoo looga gol leeyahay inaysan ciyaartoyda dhaawacmin madaama kulamo xiriir ah la ciyaarayo.
Inkastoo la filayay in sharcigaan uu noqon doono mid ku meel gaar ah xilli ciyaareedkan, hadana FIFA ayaa u ogolaatay horyaalada inay sharcigaan dhaqangelin karaan xilli ciyaareedka soo socda.
Guddiga dejiya sharciyada kubada cagta ee IFAB ayaa goodhaweyd warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen inay go’aansadeen inay horyaalada u ogolaadaan inay isticmaalaan shan bedel ilaa iyo bisha July 2021, madaama saameynta Korona Fayras ay weli taagan tahay.
Sharcigaan waxaa sidoo kale loo ansixiyay tartamada caalamiga ah ee la qabanayo bisha July ama Agoosto ee 2021 sida Koobka Qaramada Yurub ee xagaaga soo socda.
“Tartamada qaar waxay bilaaban doonaan iyadoo kooxaha aysan helin soo kabsasho iyo diyaargarow fiican” ayay FIFA ku tiri warbixin ay soo saartay.
“Tartamada intooda badan ee xilli ciyaareedka soo socda waxaa la dheeli doonaa waqti kooban madaama dib u dhac dhanka jadwalka ah uu jiro sidaasi darteed wax isbedel ah laguma sameynayo sharciga u ogolaanaya in koox walba ay shan bedel isticmaasho.
“Si kastaba, si looga hortago in ciyaarta ay joogsato mar walba, koox walba waxay heysataa seddex fursadood oo ay shanta bedel ku sameyn karto, inkastoo bedelka la sameeyo waqtiga nasashada aan loo xisaabin doonin seddexda fursadood.
FIFA waxay qoraalkeeda raacisay: “Go’aanka in sharcigaan la dhaqangeliyo waxay ku xiran tahay maamulka horyaal walba iyo tartan walba”